Nepali Rajneeti | संसद् भवनभित्रको अनौठो गतिविधिको भिडियो बाहिरियो
चैत्र २५, २०७७ बुधबार १७०६ पटक हेरिएको
संसद् भवनभित्रैको यौ’नज’न्य ग’तिवि’धिको भिडियो लिक भएको छ । भिडियो लिक भएपछि अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मौरिसनले आश्चर्यजनक र घृ’णित भ’एको बताउनुभयो ।
मौरिसनले यौ’नज’न्य क्रि’याकला’पको आ’रोप लागेका संसद् भवनमा एक सदस्यलाई कामबाट निकाला गरिएको बताउनुभयो । टेन नेटवर्क टेलिभिजन न्युजले सोमबार केही सरकारी कर्मचारीहरुले उक्त भिडियो बाहिर ल्याएको खुलेको छ ।
उनीहरुले फेसबुकको म्यासेन्जरमा एउटा ग्रुप बनाएर भिडियो लिक गराएका हुन् ।
उक्त ग्रुपमा उनीहरुले संसद् भवनमा भएका यौ’नज’न्य क्रि’याकला’पको त’स्वीर तथा भिडियो लिक गराएको बताइएको छ ।
जसमा एक महिला सांसदको कार्यकक्षमा कैद गरिएको भिडियो पनि छ ।
जानकारी अनुसार एक भिडियोमा पूर्व सरकारी कर्मचारीले संसद् भवनको प्रार्थनास्थललाई मानिसहरुले यौ’नज’न्य ग’तिवि’धिको लागि प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बाहिरबाट यौ’नक’र्मीह’रुलाई पनि संसद् भवनमा ल्याइने गरेको उनले दावा रहेको छ । यो सँगै अष्ट्रेलियाको संसद् भवनभित्रको संस्कारको विषयमा पनि प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
गत महिना संसद् भवनकी एक महिला कर्मचारीले आफ्ना सह’कर्मीले आ’फूलाई संसद भवनभित्रै ब’लपू’र्वक स’म्ब’न्ध रा’खको आरोप लगाएकी थिइन् ।
यस घटनापछि प्रधानमन्त्री मौरिसनले माफि पनि माग्नु परेको थियो । ति महिलाले आफूमाथि दुई वर्षसम्म त्यस्तो कार्य गरिएको बताएकी छिन् ।
उनलाई प्रहरीमा उजुरी नदिन द’बाब दि’ने ग’रिएको थियो । त्यसपछि अन्य केही महिलाहरुले हिम्मत गरेपछि उक्त घटनाबारे थप खुलासा भएको हो ।
जसमा केही शीर्ष सरकारी अधिकारीमाथि पनि त्यस्तो अ’प’राध गरेको आ’रोप लागेको थियो । लेबर पार्टीकी सिनेटर क्रिस्टिना केनेअल्लीले त्यो भिडियो संसद् भवनमा महिलामाथि हुने अ’पमा’नको ए’क प्रमाण भएको बताउनु भएको छ ।
अर्थमन्त्री सिमोन ब्रिमिङघमले सोमबार सार्वजनिक भएको भिडियोबारे आवश्यक थप अनुसन्धान हुने जानकारी दिनु भएको छ ।
‘मलाई बरु गो’ ली हा’नेर मा’रिदि’नु तर ता’लि’बानको हातमा नसु’म्पिदिनु’ !
महिला बि’रू’द् यति क’ठोर कदम चाल्दै ता’लीवान !
एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति होस् : सभामुख सापकोटा
ढुं’गाले हा’नेर प्रधानमन्त्रीको टा’उको फु’टाइयो ! कारण थियो यस्तो
हामी विश्वमा आधिपत्य खोज्दैनौं : चिनियाँ राष्ट्रपति
राष्ट्रपति चढेको हेलिकप्टरमा हानियो गो’ली